လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်တစ်ခုဖန်တီးနည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 2, 2015 စနေနေ့, သြဂုတ်လ 1, 2015 Douglas Karr
စျေးကွက်၏ ၇၄% သည်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် အသွားအလာတိုးလာ တစ်ပတ်လျှင် ၆ နာရီမျှသာဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သုံးစွဲပြီးနောက်အမေရိကန်စားသုံးသူ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ Quicksprout ၏အဆိုအရဆိုရှယ်မီဒီယာပြက္ခဒိန်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာဗျူဟာကိုအာရုံစိုက်ရန်၊ အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာခွဲဝေချထားရန်၊ သင်တသမတ်တည်းထုတ်ဝေရန်ကူညီရန်နှင့်သင်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖန်တီးရန်စီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။
လူမှုမီဒီယာပြက္ခဒိန်တစ်ခုကသင့်အားအရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုတသမတ်တည်းမြှင့်တင်ရန်၊ သင်ဖြုန်းတီးနေသောအချိန်ပမာဏကိုလျှော့ချရန်နှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို စုစည်း၍ curate လုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Quicksprout ၏သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ပါ။ လူမှုမီဒီယာပြက္ခဒိန်တစ်ခုသင်ဖန်တီးရသည့်အကြောင်းရင်းလူမှုရေးမီဒီယာပြက္ခဒိန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်မဟာဗျူဟာများအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်ကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်။
သငျသညျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်တင်းပလိတ်များနှင့်အမြောက်အများတင်ပို့ template မှတိုက်ရိုက်Hootsuite 's blog ။ လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်မြှင့်တင်မှု update တစ်ခုစီတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
အဘယ်သူသည် - လူမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုထုတ်ပြန်ရန်မည်သည့်အကောင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်များကတာဝန်ရှိသနည်း။ တောင်းဆိုမှုများကိုမည်သူတုန့်ပြန်မည်နည်း။
ဘာ - သင်ဘာရေး၊ ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်ပါဝင်မှုနှင့်မျှဝေမှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ သင်ပိုမိုကျယ်ပြန်ပိုမိုသက်ဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့သေချာစေရန်ထည့်သွင်းရန် hashtags ကိုသုတေသနပြုပြီးပြီလား
ဘယ်မှာ - သင်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှဝေနေပြီး၊ သင်ထုတ်လွှင့်နေသောချန်နယ်အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးမြှင့်တင်မည်နည်း။
ဘယ်တော့လဲ - ဘယ်အချိန်မှာမွမ်းမံတော့မလဲ။ ဖြစ်ရပ်များမှပို့စ်များအတွက်၊ သင်သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်ရေတွက်နေပါသလား။ အဓိကမွမ်းမံမှုများအတွက်၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေသလား၊ သို့မှသာသင်၏ပရိသတ်သည်ကန ဦး နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်လွတ်လျှင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်လား။ ပွဲမတိုင်ခင်၊ ကျင်းပမယ့်၊ ပြီးနောက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေဖို့လိုတဲ့ပွဲနေ့တွေ၊ အစည်းအဝေးတွေလိုသိထားသင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိလား။
အဘယ်ကြောင့် - မကြာခဏလွဲချော်နေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်သင်သည်ဤလူမှုရေးအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုတင်နေသည်? သင်ပန်ကာသို့မဟုတ်နောက်လိုက်တစ် ဦး အားသင်ပြုလုပ်စေလိုသည့်ခေါ်ဆိုမှုကိုအရေးယူရန်နှင့်လူမှုရေးထုတ်ဝြေခင်း၏ထိရောက်မှုကိုမည်သို့တိုင်းတာမည်ကိုမှတ်မိရန်အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားကြောင်းသေချာစေရန်။
ဘယ်လိုလဲ - လွဲချော်နေသောအခြားသော့ချက်ကျသောနည်းဗျူဟာ ... update ကိုသင်မည်သို့မြှင့်တင်မည်နည်း။ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များမျှဝေရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်ရှိပါသလား။ လူမှုရေးမွမ်းမံမှုများမကြာခဏစီစစ်သည့် (Facebook ကဲ့သို့) လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တင်ရန်ကြော်ငြာအတွက်သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်ရှိသလား။
UpSnap: စျေးနှုန်းချိုသာသောမိုဘိုင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့်ပထဝီအနေအထားအရပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာခြင်း
သြဂုတ် 5, 2015 မှာ 8: 43 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! ငါမကြာသေးခင်ကတွစ်တာကိုစသုံးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဒီအကြံပြုချက်တချို့ကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်